သင်ဟာကြာကြာမနေပါ၊ စုံတွဲများရဲ့ Toboggan ပြိုင်ပွဲဟာ Erciyes တွင် ၆ ကြိမ်မြောက်ပွဲစဉ်ဖြစ်သည် RayHaber | raillynews
[07 / 04 / 2020] နောက်ဆုံးမိနစ် .. ! Roketsan စက်ရုံတွင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခြင်း	06 တူရကီ
[07 / 04 / 2020] ဆေးရုံလုပ်ငန်းကို Istanbul, Sancaktepe တွင်စတင်ခဲ့သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[07 / 04 / 2020] အငြိမ်းစားအားလပ်ရက်အပိုဆုကြေးများကိုစတင်ပေးဆပ်ခဲ့သည် .. ! ဒါဆိုဘယ်လိုငွေပေးချေမှုကိုလုပ်မှာလဲ။	06 တူရကီ
[07 / 04 / 2020] Coronavirus ကိုတိုက်ဖျက်သည့်နေရာတွင်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့နေထိုင်ရန်စီမံကိန်းစတင်သည်	06 တူရကီ
[07 / 04 / 2020] အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ၁၃၆၀၀၀ အတွက်သမ္မတအာဒိုဂန်မှသတင်းကောင်း	06 တူရကီ
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး38 Kayseriသင်ဟာကြာကြာမနေပဲ၊ စုံတွဲများရဲ့ Toboggan ပြိုင်ပွဲဟာ Erciyes မှာ ၆ ကြိမ်မြောက်ရောက်နေပြီ
21 / 02 / 2020 38 Kayseri, အထွေထွေ, တူရကီ, TELPHER
ခင်ဗျားတို့ကစုံတွဲတွေကြားပြိုင်ပွဲမှာမ ၀ င်တော့ဘူး
Kayseri Erciyes A.Ş. ကုမ္ပဏီမှရိုးရာအစဉ်အလာရှိပြီးပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်ကိုပေးသောပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ကားမောင်းပြိုင်ပွဲဖြစ်သော "You are you have большеမဟုတ်တော့ပါ" သည် Erciyes ရှိဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ဆဌမအကြိမ်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းရာသီတွင်ကွဲပြားခြားနားသောလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်သော Erciyes နှင်းလျှောစီးစင်တာသည် guests ည့်သည်များအားနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောတနင်္ဂနွေနေ့ကိုဆက်လက်ပေးသည်။ ဒါဟာအတိတ်တနင်္ဂနွေ Sucuklu, လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူဝက်အူချောင်းမုန့်ကိုစားခြင်းပြိုင်ပွဲများ၏တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးနှင့်သာလက်မှတ်ရေးထိုးပေါက်ကွဲရန်နှင့်ယခု Erciyes pair တစုံဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှယူပါလိမ့်မယ်။ Mix Life Center၊ Radisson အပြာရောင်ဟိုတယ်၊ byemen's နှင့် The Kayseri Loft ဟိုတယ်တို့မှထောက်ပံ့သော Kayseri Metropolitan Municipality Erciyes A.Şမှစီစဉ်သောပြိုင်ပွဲတွင်စုံတွဲများသည်ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်ဆလိုက်နှင့်အတူဆွဲယူပြီးအဆုံးအထိရောက်ရန်ကြိုးပမ်းကြမည်ဖြစ်သည်။ အလိုတော်။ စပွန်ဆာများမှဆုအမျိုးမျိုးကိုပြိုင်ပွဲ၏ဆုရရှိသူများအားပေးလိမ့်မည်။ စုံတွဲများသည် "Peerless Now You Withdrawable" သက်တူရွယ်တူများယှဉ်ပြိုင်မှုတွင်အလျင်မြန်ဆုံးနည်းဖြင့်ပြိုင်ပွဲအဆင့်ကိုအဆုံးသတ်ရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။ ထိုတွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေမှုများကိုအတူတကွတွေ့ကြုံခံစားရမည်။ စွတ်ဖ်ပြိုင်ပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊
Kayseri Erciyes သည် about အဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကြေငြာချက်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကChairman္ဌ Murat Cahid Cıngıက“ ကျွန်တော်တို့ guests ည့်သည်တွေဟာရာသီတစ်လျှောက်လုံးရောင်စုံလူမှုရေးနှင့်အားကစားလှုပ်ရှားမှုများကို Erciyes ရှိစည်းရုံးခြင်းအားဖြင့်သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်ရရှိစေရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ ၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုမှာ“ သင်မဟုတ်တော့ပါ” ဟုခေါ်သည့်ရိုးရာအပျော်တမ်းပြိုင်ပွဲဖြစ်သည်။ တူရကီရဲ့ Erciyes တနင်္ဂနွေစုံတွဲများ၏ပါဝင်မှုနဲ့ပျော်စရာအဖြစ်အပျက်ကွဲပြားခြားနားသောမြို့များမှလာပိုပြီးလက်မှတ်ပေါင်းယူလိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
A.Ş. ထံမှ Erciyes ဆောင်ပုဒ်ပြိုင်ပွဲတွင်နှင့်အတူရွယ်တူချင်းမှတူစွတ်ဖါး '' အခုဆိုရင်ခံရခက်ခဲတဲ့သင် Register ''
Erciyes ကျင်းပသည့်ပုခက်ပြိုင်ပွဲဆုပေးပွဲအခမ်းအနား "အခုသင်မခံနိုင်သော Register"
အဆိုပါ Uludag ဆောင်းရာသီပွဲတော်အတွက်ကတ်ထူပြားစွတ်ဖားဆွဲပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့်
အဆိုပါ Cable ကိုမော်တော်ကားတီထွင်မှုအတွက် 30 နှစ်ပတ်လည်အိမ်ထောင်သည်စုံတွဲများ
ဒါဟာပုခက်ရာသီ Erciyes အတွက်ရသေးကျော်မယ့်
ဿွာန်နှင့်လောင်သောအပူမခံနိုင်သော Konya လမ်းရထားဆောင်ခဲ့ပါပြီ
ကအရမ်းကို Uludag စွတ်ဖားလူမျိုး
Hakkari အင်တာမီလန်ကျောင်း Alpine နှင်းလျှောစီးပြိုင်ပွဲ
Erciyes နှင်းလျှောစီး Center က Erciyes ဖလားစိတ်လှုပ်ရှား
လက်တို့ကိုသုံးကြိမ်ပြောင်းလဲသွားတယ်, 1 ဘီလီယံအထိသုံးစွဲ BTK ရထားလမ်းစီမံကိန်းအားမပြည့်စုံကနျြရ
မိုဘိုင်းအတွက်အခုဆိုရင် Erciyes နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာ
Kayseri Erciyes Inc က
Sabiha Gökçenရှိလေယာဉ်မတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၀ န်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ချက်
နောက်ဆုံးမိနစ် .. ! Roketsan စက်ရုံတွင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခြင်း
AR SPARK အတွင်းပိုင်း - ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်အန္တရာယ်များသောအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်သည်
TCDD သည်အခမဲ့မျက်နှာဖုံးများကိုBaşkentrayနှင့် Marmaray ခရီးသည်များကိုဖြန့်ဝေသည်
Antinya Metropolitan မှလက်တောက်ဆေးလက်များအထိပိုးသတ်ဆေး
ဆေးရုံလုပ်ငန်းကို Istanbul, Sancaktepe တွင်စတင်ခဲ့သည်
မျက်နှာဖုံးနှင့်လက်အိတ်များကို Malatya Atabey Ferry Pier ၌နေထိုင်သူများထံသို့ဖြန့်ဝေခဲ့သည်
အငြိမ်းစားအားလပ်ရက်အပိုဆုကြေးများကိုစတင်ပေးဆပ်ခဲ့သည် .. ! ဒါဆိုဘယ်လိုငွေပေးချေမှုကိုလုပ်မှာလဲ။
TCDD Izmir Port Operation Directorate တွင် Corona ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး
EGIAD Webinar နှင့်အတူအရည်အချင်းပြည့်ဝသောနည်းပညာ ၀ န်ထမ်းသည်စားပွဲပေါ်၌ရှိနေသည်
သင်၏လူမှုအကွာအဝေးကိုအကာအကွယ်ပေးသော EGO ဘတ်စ်ကားများနေရာချထားသည်
BaşakşehirKayaşehir Metro Line အချက်အလက်
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှသင်တန်းသား (၂၀) ​​ဦး ၀ ယ်မည်
E-commerce ပလက်ဖောင်းသည် Hepsiburada တွင်လူ ၅၀၀၀ ကိုငှားရမ်းနိုင်သည်
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် IMM သည်အခမဲ့မျက်နှာဖုံးပေါင်း ၁၀၀ ကိုဖြန့်ဝေခဲ့သည်
Izmir မှပို့ဆောင်သူများသည် Thermal Camera Application ကိုစိတ်ကျေနပ်သည်
Ankara ရှိ EGO Bus Drivers များအတွက် Coronavirus မှ Transparent Protection
အခမဲ့မျက်နှာဖုံးဖြန့်ဖြူးမှုကို Ankara ရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များမှစတင်ခဲ့သည်
EpttAVM မျက်နှာဖုံးဖြန့်ဖြူးမှုက E-Government သို့ကူးပြောင်းလိုက်ပြီ။ ဒါကြောင့် E-Government အခမဲ့မျက်နှာဖုံးကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ။
2023 ရှိ Edirne Istanbul မြန်နှုန်းမြင့်လိုင်း
TCDD သည် Bursa မြန်နှုန်းမြင့်စီမံကိန်းကို AYGM သို့လွှဲပြောင်းခဲ့သည်